Fomba fanao tsara indrindra avy amin'ny seminera ho an'ny sivana amin'ny Google Analytics
Ny solo-peo Google Analytics dia afaka manova, manova ary mametra ny angon-drakitra hita ao amin'ny endrika fomba fijery. Ampirisihina hatrany ny filaharanao amin'ny fomba filalaovana tsara indrindra mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny angoninao ao amin'ny Internet.
Oliver King, mpitantana ny Success Successor avy amin'ny Semalt , dia mifantoka amin'ny zava-dehibe tokony hotadidinao mba hahombiazana: tsy misy ny fifamoivoizana anatiny, ny lava-bato, ny fahalalanao ny loharanom-pifandraisana sosialy, Hetsika isan-karazany - intruder alarm wireless.
Mandoto ny fitohanana anatiny
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mandinika ny karazana fitohanan'ny fiarahamonin'ireo tranonkala ary tsy miraharaha ny maha-izy azy sy ny maha-tokana azy. Raha te-hitantana ny raharaham-barotra mandritra ny androm-piainana ianao, dia zava-dehibe ny mandamina ny fifamoivoizanao ary manome toky ny kalitaony. Azonao atao ny mijery ny zavatra ataon'ny mpanjifanao ao amin'ny tranonkalanao, ary raha marina izany, dia tsy maintsy manivana tanteraka ny fifamoivoizana anatiny ianao. Ny sahan-drakitry ny fitaterana an-tseranana dia afaka manaisotra ny data izay avy amin'ny biraonao manokana na ny tranonao. Amin'ny ankapobeny, ny olona dia manaisotra azy ary tsy manisa izany ho an'ny isan'izy ireo isa feno isan'andro. Ny fomba tokana hanesorana ny fifamoivoizana anatiny dia ny famoronana filters ary ny fanakanana ny adiresy IP. Ilaina foana ny fanesorana ny data amin'ny kaonty Google Analytics ary afaka manome valiny tsara.
Fikambanana maro no maniry hahita ny zavatra ataon'ireo mpiasa mandritra ny ora fiasan'ny birao ary inona ny fanehoan-kevitr'izy ireo ao amin'ny tranonkalany sy ny bilaoginy. Noho izany dia mamorona sivana fotsiny izy ireo ary manilika ny fifamoivoizana anatiny rehetra..Adiresy IP mifototra izay manome anao valiny marina. Ohatra, ireo mpiara-miasa izay miasa any an-tranony ary te-hahazo ny vokatra tsara avy amin'ny vohikalany dia mety hampidirina na hanilihana ny angon-drakitra mifanaraka amin'ny fepetra takian'izy ireo.
Ny Google Analytics dia manara-maso ny URL roa samy hafa izay fantatra amin'ny anarana hoe slashes filtra. Amin'ny fampiasana ity sivana ity dia afaka mamaly mora foana ny valin'ny fanontanianao ianao. Manoro hevitra anao izahay hamorona slashes sy filtres manaraka, mifototra amin'ny fepetra takinao.
Filozofy ambany kokoa
Ny Google Analytics dia afaka manampy anao handositra ny fifamoivoizana marefo. Raha tsy misy solosaina madinika, ireo mpisera Google Analytics izay te-hahazo fampahalalana momba ny isan'ireo pejy fijery amin'ny pejy dia afaka mahita ao amin'ny kaontiny manokana. Izany dia mety hitarika azy ireo hanala ireo fitaovana mandany fotoana sy hanamafy ny hatsaran'ny tranonkala. Amporisihina ny hampiasanao ny sivana madinika mba hanovana ny angon-drakitra rehetra, ny fangatahana URL, ny fanovaovan'ny fanentanana ary koa ny fisehoan-javatra.
Fikambanana ara-media sosialy
Ireo mpampiasa nomerika dizitaly dia mampiasa ny filazam-baovaon'ny tambajotra sosialy. Google Analytics dia nanasokajy ny foto-kevitra avy amin'ny media sosialy toy ny Twitter, LinkedIn, Google+ ary Facebook. Heveriny ho fampitam-baovao mitovy amin'ireo referrals izany, ary raha te-hikaroka azy ireo ianao, dia soso-kevitra ny hanisanao ny tatitra fanavaozana mba hahafantarana ny habetsahan'ny fomba fijerin'ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy. Tsy mety ny miteny fa ny fikambanana isan-karazany dia miara-miasa amin'ny media sosialy hanitatra ny orinasany. Amin'ny famoronana filtre sy sokajy loharano, azonao atao ny manokatra ny tranokalanao ao amin'ny fikarohana ary ahazoana antoka ny fahatokisana azy amin'ny ankapobeny.